हाम्रो खुशी हाम्रो ‘आज’मा छ « News of Nepal
हाम्रो खुशी हाम्रो ‘आज’मा छ
मानिसको स्वभाव नै हो, उसले कुनै कार्य तुरुन्तै गर्छ भने केहीलाई भोलिका लागि छोडिदिन्छ । प्रश्न के हो भने, उसले कस्तो प्रकृतिको कामलाई तुरुन्तै गर्छ अनि कुन कार्यलाई भविष्यका लागि छोडिदिन्छ ? के देखिएको छ भने, बाहिरी रूपबाट हेर्दाखेरि त्यति महत्त्वपूर्ण नदेखिएका कुरालाई धेरैजसो भोलिका लागि थाँती राख्ने गरिन्छ । मानिसले आफ्नो दिनको सफलतालाई वस्तुतः उसले के–के हासिल गरेको छ भनेर भौतिक उपलब्धिका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने गर्छ । तर, के मानिसले केही समय धैर्यधारण गरेर कहिल्यै यस्तो सोचेको छ– जुन जीवनमा ऊ भौतिक सुख प्राप्त गर्ने लालसा लिएर दिनरात लागिपरेको छ, त्यो जीवन उसले किन पाएको हो ? उसको जीवनको उद्देश्य के हो ?
एकातिर सारा संसारको जिम्मेवारी छ भने अर्कातिर तपाईँको जीवन छ । यो तपाईँलाई दिइएको हो र यो तपाईँका लागि हो । तपाईँले जुन चीज प्राप्त गर्नुभएको छ, के त्यसलाई सम्हाल्नका लागि आजसम्म कुनै कोशिश गर्नुभएको छ या छैन ? आजको दिनमा प्राप्त भएको अनमोल चीजलाई जोगाउनुभएको छ कि छैन ?
पानीको कमी नभएको स्थानमा मानिसहरू पानी खेर फालिरहेका हुन्छन् । पानीको अभाव भएका क्षेत्रमा त्यो धारोको मुनि पनि एउटा कुनै भाँडो थापिएको हुन्छ पानी खेर नजाओस् भनेर । तपाईँको श्वास पनि यस्तै कुरा हो । एकदिन आयो । त्यो पहिलो श्वास थियो । अनि, एकदिन जानेछ र त्यो अन्तिम श्वास हुनेछ अनि बीचमा रहेको दिन नै आजको दिन हो ! यही आजको दिनलाई तपाईँ संसारका सबै काम सम्हाल्नका लागि खर्चिनुहुन्छ । तथापि, जुन अनमोल श्वास पाइएको छ नि त्यसमा ध्यानै दिनुहुन्न । वास्तवमा हामी त व्यापार वृद्धि भएको दिन, राम्रो जागिर प्राप्त भयो भने, यस्ता कुराका आधारमा त्यस दिनलाई उत्तम समय मान्छौँ । तर, सबैभन्दा उत्तम दिन त कुन हो भने, जुन दिनमा तपाईँले भन्नुहुनेछ– ‘आजको दिनमा मैले यो जीवन पाएको छु । मेरो श्वास चलिरहेको छ । म जीवित छु । मसँग यो मौका प्राप्त भएको छ । म यसलाई खेर फाल्न चाहन्न । आजको दिनमा मैले त्यस कुरालाई बुझ्न पाएको छु, जसका बारेमा ठूला–ठूला विद्वान्हरूले आफ्नो पूरा जीवनभर चर्चा गर्दै आएका छन् ।’
यो श्वासको मूल्यलाई बुझ्न सकिन्छ । यो कुरालाई बुझेका दिनदेखि यो जीवन व्यर्थ हुनेछैन । त्यसदिन तपाईँले पनि त्यो हृदयरूपी भाँडोलाई त्यो धारोमुनि थाप्नुहुनेछ । त्यसै खेर गइरहेको पानी तबदेखि बचत हुन थाल्नेछ । जिन्दगी सुध्रिन थाल्नेछ । त्यो चीज प्राप्त हुनेछ, जसबाट हामीले आफ्नो जीवनलाई पूर्णता प्रदान गर्न सक्नेछौँ । हरेक दिन आभारयुक्त हृदयले, चैन अनि आनन्दले विभोर भएर भन्न सक्नुहुनेछ– ‘हे सृष्टिकर्ता, तपाईँलाई लाखौँलाख आभार ।’ त्यसपछि के भन्नुहुनेछ भने, आजको दिन नै मेरो जीवनमा पहिलो दिन हो । यदि भोलि फेरि यो दिन आयो भने म यसलाई त्यसै खेर जान दिनेछैन । यसै गरी हामीले हरेक दिनलाई स्वागत गर्नु आवश्यक छ । आउने भोलिका लागि होइन, न त बितेको हिजोका लागि नै, तर आजका लागि अनि सधैँका लागि । किनभने, यो जीवनमा जति पनि दिन आउँछन्, ती सबै ‘आज’ नै भएर आउँछन् । भोलि, पर्सि, निकोर्सि भएर आउँदैनन् । ‘आज’मा नै आनन्द लुकेको छ ।
अहिले हामीसँग समय छ । हामीले भोलिलाई सपार्नतिर नभएर आजकै बारेमा सोच्नुपर्छ । आज नै आफ्नो हृदयलाई शान्ति र आनन्दले भर्नुहोस् । भोलि आओस्, नआओस् मैले यसलाई महत्त्व दिनु आवश्यक छैन । यदि भोलि आयो भने म त्यसलाई पनि आज स्वागत गरेजसरी स्वागत गर्नेछु । किनभने मेरो हृदयरूपी भाँडो दिन–प्रतिदिन भरियोस् र जीवन सफल होओस् ।
मूल कुरा त यो श्वासका बारेमा नै हो । यो श्वास कति ठूलो आशीर्वाद हो तर हामी यसलाई बिर्सन्छौँ ! मानिसमा कत्रो कृपा भएको छ, किनभने उसले यो जीवन प्राप्त गरेको छ, यो शरीर प्राप्त गरेको छ अनि हरक्षण उसभित्र यो श्वास स्वतः चलिरहेको हुन्छ । जीवनको पहिचान नै के हो भने, मानिसमा यो श्वास चलिरहेको छ या छैन ? यो श्वास त सृष्टिकर्ताको कृपाले आफैँ आउँछ अनि आफैँ जान्छ पनि । आफ्नो पछाडि उसले यस्तो समयलाई छोडेर गएको हुन्छ, जुन कहिल्यै फर्केर आउँदैन । जब एउटा–एउटा श्वास लिनका लागि पनि संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ नि ! तब त्यही अन्तिम समयमा मात्रै यसको महत्त्व थाहा हुन्छ ।
तपाईँको छेउछाउमा जे–जे भइरहेका छन्, तपाईँको जीवनमा जेसुकै भइरहेको भए पनि तपाईँ त्योभन्दा माथि हुनुहुन्छ । जसरी फोहोर पानीमा पनि कमलको फूल रहन्छ तर त्यसभन्दा माथि नै रहन्छ । तपाईँ पनि त्यसरी नै रहनुभएको छ ।
किनभने, तपाईँको जीवनको यात्रा तपाईँको पहिलो श्वासबाट भएको थियो । त्यस क्षणदेखि यो श्वासको आउने–जाने क्रम रोकिएको छैन । यो जीवनभरि नै तपाईँको साथमा रहनेछ । तपाईँको अन्तिम क्षणसम्म । यो श्वास तपाईँभित्र आइरहन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ । यसमाथि ध्यान दिनुहोस् । यदि तपाईँले यही आइरहेको श्वासलाई आफ्नो जीवनमा महसुस गर्नुभयो भने यसले आराम, चैन अनि सन्तुष्टि प्रदान गर्दछ । तपाईँ जीवित हुनुभएकोमा आभारी हुनुहोस् । यो अस्तित्व हुनुलाई प्रशंसा गर्ने गर्नुहोस् ।
मानिसको जीवनमा बुझ्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् । तथापि, यो जीवनलाई नै बुझ्नु अत्यावश्यक छ । तपाईँको जीवनको सबैभन्दा पहिलो कुरा के हो ? ‘तपाईँ भित्रबाटै खुशी हुन चाहनुहुन्छ । तपाईँ आफ्नो जीवनमा सन्तुष्ट हुन चाहनुहुन्छ ।’ यस्तो इच्छा हरेक व्यक्तिको जीवनमा हुने गर्दछ । तर, आज मानिस लोभ–लालचको दलदलमा फसेको छ । मलाई यो पनि चाहिएको छ, त्यो पनि चाहिएको छ । यिनै चाहना पूरा गर्छु भन्दाभन्दै हामी आफ्नो पूरै जीवनलाई बिताइदिन्छौँ । तर, आफ्नो वास्तविक आकाङ्क्षालाई बुझ्नै सक्दैनौ । हाम्रो वास्तविक चाहना हो– शान्तिको चाहना । जीवनमा शान्तिको अनुभव गर्न सकिएन भने जहाँ गए पनि दुःखी नै भइरहिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा एउटा कथा छ । एकजना लोभी प्रवृत्तिका राजा थिए । उनलाई थरी–थरीका स्वादिष्ट भोजन खाने इच्छा भइरहन्थ्यो । उनले आफ्ना भान्सेलाई भने– ‘एकदम मीठा–मीठा खानाका परिकार तयार पार !’ त्यसैले भान्सेले के सोच्यो भने यसपटक त म यस्तो मीठो परिकार बनाउँछु जसले गर्दा राजा पनि खुशी भएर मलाई पुरस्कार दिऊन् ।
अनि, उनले निकै मीठो मिठाई तयार पारे । त्यसको वासना पूरै राजमहलमा पैmलियो । राजाले पनि त्यो बास्नाको सुगन्ध लिएपछि उनलाई पनि असाध्यै मन प¥यो । उनले यो सोचे, ‘मलाई लाग्छ, पक्कै पनि भान्सेले नै यस्तो स्वादिष्ट भोजन तयार पारेको हुनुपर्छ ।’
बिस्तारै–बिस्तारै राजमहलका कुनाकानीमा भएका मुसाहरूसम्म पनि त्यो मिठाईको बास्ना पैmलँदै थियो । हुँदा–हँुदा टाढा–टाढाबाट मुसाहरू त्यो बास्नालाई पछ्याउँदै दरबारमा आउन लागे । पूरै महल मुसैमुसाले भरिभराउ हुन लाग्यो । कहिले पर्दामाथि मुसा चढिरहेका छन्, कहिले खानामा पसिरहेका छन् । राजालाई यो सबै घटनाले सही नसक्नु भयो ।
राजाले आफ्ना मन्त्रीहरूको सभा बोलाएर भने– ‘यी सबैलाई हटाउने कुनै उपाय खोजौँ !’ मन्त्रीहरूले भने, ‘महाराज ! एउटा तरिका छ । बिरालाहरूलाई बटुलौँ । बिरालालाई ल्याउनासाथ मुसा भाग्छन् ।’ राजाले आदेश दिए, ‘जानुहोस् ! राज्यका सबै ठाउँमा जति पनि बिरालाहरू छन्, सबैलाई समातेर ल्याउनुहोस् ।’
अब राजमहलका हरेक क्षेत्र बिरालाहरूले ढाकिएको छ । सबै मुसाहरू त भागे तर अब जता हे¥यो– बिरालै–बिराला छन् । बिरालाहरू कहिले आफ्ना नङ्ग्राले पर्दा च्यातिरहेका छन् त कहिले गलैँचालाई । राजालाई फेरि अर्को चिन्ताले दुखित तुल्यायो ।
राजाले फेरि सभा बोलाएर भने– ‘मुसा त भागे, अब बिरालाहरूलाई कसरी भगाउने !’ मन्त्रीहरूले भने, ‘महाराज ! कुकुरका डरले बिरालाहरू भाग्छन् ।’ राजाले सिपाहीहरूलाई आदेश दिए, ‘जानुहोस् ! जति पनि कुुकुरहरू छन्, सबैलाई यहाँ ल्याउनुहोस् ।’
सिपाहीहरूले कुकुरहरू लिएर आए । अब त जता हेरे पनि कुकुरै–कुकुर । कुकुरले पूरै राजमहललाई फोहोर बनाउन थाले । अब कुकुरबाट हैरान भएका राजा सोच्न लागे । अब के गर्ने ! कुकुरबाट बच्नका लागि हात्तीलाई झिकाइयो । त्यसपछि सबैतिर हात्ती नै हात्तीले ढाकेको छ । महलभरि तिनीहरूले भत्काउन–बिगार्न थाले । फेरि राजाले मन्त्रीहरूलाई मुसा ल्याउनका लागि आदेश दिए, किनकि हात्ती मुसासँग डराउँछ ।
अब फेरि मुसालाई ल्याइयो । सबै हात्ती त्यहाँबाट छोडेर अन्तै गए । पहिला जसरी नै सबैतिर मुसैमुसाको भीड देखिन थाल्यो । अनि, बल्ल राजालाई महसुस भयो– त्यही मिठाईको बास्नाका कारण यी सबै घटना घटिरहेका छन् । मुसालाई भगाउन उनले भान्सेलाई बोलाएर भने, ‘यो मिठाईलाई कतै टाढा लगी फ्याँकेर आऊ । अबदेखि यस्तो मीठो खानेकुरा कहिल्यै नबनाउनू ।’ अनि, मिठाईको सुगन्ध हटेपछि मुसाहरू त्यस राजमहललाई छोडेर अन्तै गए ।
सारा संसारको हालत यस्तै छ । लोभका कारणले हामी कुनै समस्यालाई उब्जाउँछौँ । त्यसपछि त्यसको समाधान खोज्छौँ । त्यो समाधानलाई खोज्दा–खोज्दा फेरि अर्को समस्या उत्पन्न हुन्छ । फेरि त्यो समस्याको हल खोज्न थाल्छौँ अनि अरू समस्या उत्पन्न हुँदै जान्छन् । यही क्रमानुसार हामी ती समस्यालाई समाधान गर्नतिर तल्लीन हुन्छौँ । लोभ नै गर्नु छ भने तपाईँभित्र जुन श्वास आइरहेको अनि गइरहेको छ यसका लागि लोभ गर्नुहोस् । यसलाई खेर जान नदिनुहोस् । लोभ र चाहनाले हामीलाई दुःख दिन थालेपछि हामीले के कुरामा ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ भने, ‘हाम्रो वास्तविक चाहना के हो ?’ वास्तवमा हरेक व्यक्तिको हृदय आनन्दमा रहन चाहन्छ । अनि, जबसम्म आनन्द प्राप्त हुँदैन तबसम्म तपाईँको जीवन सफल हुँदैन । त्यसकारण यो संसारको इच्छारूपी बोझलाई बिसाउनुहोस् । अनि, त्यो चीजको दर्शन गर्नुहोस्, जुन हरेक समय तपाईँको श्वाससँगै तपाईँकै हृदयमा अवस्थित छ ।
(मानवता र शान्ति विषयका अन्तर्राष्ट्रिय वक्ता प्रेम रावतको सम्बोधन । संकलित एवं प्रस्तुतीकरण : डा. प्रेमराज ढुङ्गेल ।)
हाम्रो संस्कार र संस्कृतिमा बालाचतुर्दशी
संघीयता अभिशाप भएकै हो त ?
लोकतन्त्रको उपहास कतिन्जेल ?
किरात धर्मगुरु आत्मानन्द जन्मोत्सव र उँधौली
विप्लवको पार्टी एकता सोचनीय
प्रकाशकीय : ३८ वर्षे अनुभव
यी हुन् एमालेका निर्वाचित पदाधिकारी तथा..
अजेय सुमार्गीको टेलिकम कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज
शान्ति कसरी सम्भव हुन्छ ?
विमलेन्द्र निधिले गरे कांग्रेस सभापतिमा उम्मेदवारी..
पाँच सातापछि सर्वोच्च अदालतमा उत्साहजनक सुनुवाइ
सिरहा प्रहरीका हबल्दार सन्तोष झा तस्करको..
न्युरोडमा एडिडासकाे शो रुम
ओमिक्रोन देखिएपछि अमेरिकामा यात्राका नियममा कडाइ
पशुपतिलगायत देशभरका शिवालयमा शतबीज छर्नेको भीड(फोटो..
निखिल उप्रेतीले गरे श्रीमतीसँग मँहगो डिभोर्स: दिए भक्तपुरको घर र ५० लाख
कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशित : यसरी हेर्नुहोस् नतिजा
कक्षा १२ को नतिजा आज आउँदै
राप बोर्ड बैठक बस्दै,कक्षा १२ को नतिजा आजै आउन सक्ने
१० वर्ष काम गरेका आंशिक शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गर्ने तयारी
सिरहा प्रहरीका हबल्दार सन्तोष झा तस्करको सेटिङकर्ता
पशुपतिलगायत देशभरका शिवालयमा शतबीज छर्नेको भीड(फोटो फिचर)